Manao be midina… | mandimby maharo
Manao be midina…	Posted on 10 September 201210 September 2012 by Mandimby Maharo	Manao be midina any Betroka androany 10 Septambra ireo mpikambana ao amin’ny governemanta maromaro.Ao aloha ireo minisitra 3 lahy misahana ny filaminana, fa any ihany koa ny minisitry ny serasera izay mitondra mpanao gazety maro dia maro. Mazava ho azy fa dia ny resaka ady amin’ny dahalo no anton’ny dia.
Efa miodikodina manodidina ny tanana ao koa ireo fiaramanidin’ny tafika malagasy manao ilay atao hoe fitiliana ireo toerana ieren’ny dahalo. Ary raha ny filazan’ireo mpanao gazety moa dia ny kolonely Lylison, lehiben’ny Fis mihintsy no mitarika ireo andian’tafika any atsimo ireto. Ity farany izay manana traikefa tokoa amin’iny faritra atsimo iny satria dia niasa tany an-taona maro nialoha ny niankarany taty andrenivohitra tamin’ny taona 2009. Inoana araka izany fa dia ilamina ny ao atsimo ao ato ato . Hilamina satria raha ny tsilian-tsofina koa dia ny filohan’ny Fat mihintsy no ho avy any amin’ity herinandro ity hitsidika ireo faritra tena mafana ireo. Faritra mafana tokoa moa ny ao raha ny zava-nisy tato anatin’ny volana vitsivitsy izay satria dia efa mahery setra ny dahalo, ary tsy mitsitsy ny fokonolona manohitra izany asa ratsy izany. Manjaka ny valifaty sy ny ramatahora eo amin’ireo fokonolona sy ny dahalo ireo. Etsy andaniny koa dia misy ny lonilony eo amin’ny fokonolona sy ny mpitandro ny filaminana. Tsy hijanona amin’ny resaka fampandrian-tany fotsiny araka izany ny tsy maintsy ho atao fa eo koa ny fandaminana ny lafiny fiarahamonina amin’ny ankapobeny mihintsy;
Raha alalinina tokoa manko ny zava-misy dia tsy vao izao no nisy ny asan-dahalo tany atsimo fa efa hatrizay, saincy nirongatra izany nandritra izao olana sedrain’ny firenenaizao. Io no taratra ahitana fa tena efa lava loatra ity tetezamita ity ka efa mivoraka ny fifehezana ny fanjakana. Raha misy noho izany fiazakazahana tokony ho atao dia ny andaminana ny resaka famaranana izao olana izao no maika ka ijoroan’ny fanjakana mahefa sy matanjaka ka afaka handamina ny tany sy ny mponina;
Diso lalana ihany araka izany ny Fat raha ho any ampandry adrisa. Tsy adala kory ny mponina ao ka tsy hahalala ny setroka sy ny tomany. Ary mino marimarina aho fa tsy ny tena hiady amin’ny dahalo no anton-dian’ireo miaramila sy fitaovana lasa any fa hiaro ny Fat sao dia tofirin’dRamenabila.
Categories: societé, Uncategorized